Apple inosiya zvimwe zvikamu zvisina kunyorwa muIOS 10 beta 2 | IPhone nhau
Nguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwekutanga beta ye iOS 10, nyanzvi dzekuchengetedza vakaziva kuti Apple yakanga yasiya iyo isina kunyorwa kernel. Mushure mekufungidzira pamusoro pechikonzero, vanhu veCupertino vakasimbisa kuti vaive vasiya zvisina kunyorwa nekuti zvaisanganisira data rakakosha remushandisi uye raizovandudza mashandiro ehurongwa, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakasimbiswa mushure memabheta maviri chete einotevera sisitimu yekushandisa yezviridzwa zveIOS.
Kuita kungave kusiri iko chete chikonzero. Nyanzvi dzekuchengetedza dzinoti nenzira iyi zvimwe zvikanganiso zvekuchengetedza zvichaonekwa nekukurumidza uye zvinogona kugadziriswa nekukurumidza. Zvakare, Ubuntu ndeimwe yeakachengeteka macomputer anoshanda masystem uye haina iyo yakavharidzirwa kernel futi. Asi ruzivo rwechizvinozvino runoti Apple yaenda nhanho imwe kumberi nekuburitswa kweiyo iOS 2 beta 10 uye asiya zvimwe zvikamu zvisina kunyorwa.
1 Iyo yechipiri beta yeIOS 10 yakatonyanya kunyorwa
2 Chii chinonzi Yakachengeteka Enclave?
Iyo yechipiri beta yeIOS 10 yakatonyanya kunyorwa
Yakanga isiri tsaona. Apple yakasiya mimwe mifananidzo isina kunyorwa muna 10.0b2 (semuenzaniso, ramdisks ese uye makumi matatu nemaviri-bhuti bootloaders!) https://t.co/vE674FHWzD
- Ⓜ MuscleNerd (@MuscleNerd) July 6, 2016
Yakanga isiri tsaona. Apple yakasiya mimwe mifananidzo isina kunyorwa pa10.0b2 (semuenzaniso ese makumi matatu nemaviri-ramdisks uye bootloaders!)
Pamusoro peiyo kernel uye main fileystem (ine diki dhata yemushandisi) iyo yanga yatove isina kunyorwa mune yekutanga beta, beta rechipiri reIOS 10 rasara isina kunyorwa 32-bit bootloaders, ese ramdisks kunze kweApple TV uye ese tsanga. Chii chiri kuitika pano?
Chinhu chega chavakasiya chisina kunyorwa kubva kumifananidzo yeIOS 10 ndizvo zvatinoona nechidimbu "SEP", zvinoreva kuti Yakachengeteka Enclave. Isu tinofanirwa zvakare kuziva kuti isu tiri kutaura nezve beta kuburitswa uye hazvitongwe kunze kuti Apple ichadzokororazve mimwe mifananidzo kana hurongwa hwakatangwa zviri pamutemo, chimwe chinhu chichaitika munaGunyana.
Chii chinonzi Yakachengeteka Enclave?
Kubva pa iPhone 5s zvichienda mberi, zvishandiso zveIOS zvine diki chip mukati me processor chishandiso icho chinokanganisa kunyorera data senge iyo yakanyorerwa kupenya ndangariro uye kugadzirisa Touch ID yekuisa. Chip ichi chinonzi Secure Enclave.
Hapana software, sevhisi kana Hardware inokwanisa kuwana ruzivo rwakachengetwa muKachengeteka Enclave. Ichi chidiki chip chine yayo firmware, bootloader, uye kodhi. The «SEP» shandisa ndangariro dzako pachako yakavharidzirwa uye inongotaura chete neA9, A8 kana A7 uchishandisa switch uko processor inoisa imwe data mune yakagovaniswa ndangariro buffer uye wozoverenga zvawanikwa kumashure.
Chero zvazvingaitika, kana iwe ukazondibvunza kana ndiri kunetsekana nezvese izvo Apple iri kusiya zvisina kunyorwa, mhinduro nekukasira ingangove hongu, ndinonzwa kuti "vakaipa vakomana" vari kuzotsvaga nekushandisa zvisizvo nekukurumidza. Asi kana ndikafunga nezvazvo, ndashandisa Ubuntu pamalaptop angu kunyangwe ndisati ndachinjira kuMac, iyo sisitimu haina kunyorerwa kubva kumusoro kusvika kumagunwe uye kazhinji haina matambudziko ekuchengetedza. Kutenda kunharaunda, Ubuntu kuchengetedzeka nyaya zvakanyatsogadziriswa mumaawa uye ndizvo zvinogona kuitika sezvakaita iOS 10.
Asi hei, isu tiri kutaura nezve iyo iOS 10 betas. Iyi nharo ichave inonakidza kana mifananidzo iyi ikasiiwa isina kunyorwa munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inosiya zvimwe zvikamu zvisina kunyorwa muIOS 10 beta 2
Remote Media Manager Pro yemahara kwenguva yakati wandei